Khasaaro Ka Dhashay Qarax Lala Eegtay Ciidamo Ka Tirsan Dowladda – Kismaayo24 News Agency
by admin 24th March 2020 094
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Qarax Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Federaalka Soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay lagula eegtay Gobolka Shabeellaha Hoose.
Qaraxaas oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ah ayaa waxaa Ciidanka dowladda oo la socday gaari nooca dagaalka lagula eegtay inta udhaxaysa deegaanada Buufoow iyo Janaale, waxaana ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Ugu yaraan 7 Askari oo ka tirsan Ciidanka dowladda ayaa ku geeriyootay Qaraxaas, halka tiro kalena dhaawac uu soo gaaray, kuwaasi oo dhamaantood la sheegay inay saarnaayeen gaariga uu qaraxu haleelay.
War qoraal ah oo lagu faafiyay baraha Internet-ka Al-shabaab ayaa waxaa ay ku sheegteen Mas’uuliyada qaraxaas lala eegtay Ciidanka dowladda Federaalka oo socdaal ku marayay inta u dhexeeysa Buufoow iyo Janaale.
Al-shabaab ayaa sidoo kale sheegtay in qaraxaas ay ku dileen 7 Askari uuna gabi ahaan gubtay gaariga ay la socdeen Ciidanka ee uu qaraxu qabsaday waa sida ay hadalka u dhigeen.
Weli ma jiro war wax ah oo kasoo baxay Saraakiisha Ciidanka dowladda Soomaaliya oo ay uga hadlayaan weerarkaas ka dhacay Gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana wararkii ugu dambeeyay ee saakay aan ka helayo duleedka Jalaane ay sheegayaan in Ciidamada halkaas ay ka wadaan howlgl miino baaris ah.
Sawirro: Madaxweyne Farmaajo oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay Danjiraha Dowladda Qatar ay u soo magacowday Soomaaliya
admin 21st April 2018
DEG DEG: Qarax Xoogan oo Hada ka Dhacay Meel aan sidaas uga Fogeyn Xarunta Dowlada Hoose ee Xamar
admin 11th April 2016 11th April 2016